Technology Na Travel | Save A Train
Home > Travel Europe > Technology Na Travel
The Internet bụ n'ebe nile. Ọbụna dị ka na-ekwu Internet ka erikpuo anyị kpamkpam na anyị nwere ike agaghịkwa were ndụ anyị na-enweghị Internet. E nwere ihe fọrọ abụghị akụkụ nke ndụ anyị na-anọgide unaffected site technology na Internet. Nke a karịsịa kemgbe a ere maka ndị hụrụ na njem ma ọ bụ ndị na-achọ a na-ahụ a ebe ọhụrụ maka ihe ọ bụla nwere ike ịbụ ihe mere. Ntinye akwụkwọ bụ ugbu a dị nnọọ a click pụọ, ọ ga-abụ na-azụ, ma ọ bụ ụgbọelu ma ọ bụ ọbụna a ụgbọ ala n'ihi na okwu. Enwere ụgbọ okporo-ntinye akwụkwọ weebụsaịtị, nke na-enye mgbanwe nke ntinye akwụkwọ n'ebe ọ bụla na n'ebe nile.
Mmetụta nke Technology na njem
Nkà na ụzụ mere ụwa iyi ihe dị nnọọ obere. E nwere oge mgbe ma ọ bụrụ na m ga-eleta a ebe mba, M ga-mkpa iru mkpa ebe na-eme ka ahụ dị mkpa ntinye akwụkwọ ma ọ bụ ma eleghị anya, bụ na e nwere a enyi ma ọ bụ onye otu na-ebi ebe ahụ, M ga-kpọtụrụ ha na-arịọ ha ka ha mee ihe needful. Mgbe ahụ, wee n'ime picture na tour mmadụ. Anyị ghọrọ hassle-free ebe m ga-dị kpọtụrụ tour gị n'ụlọnga, ya gwa ya ihe m na atụmatụ ma ọ ga-n'ihu na-na-na ọ dị mkpa ihe na ebe. Ugbu a na Internet na technology, M na-adịghị enwe nchegbu banyere a ihe. All m nwere ime bụ ime ka atụmatụ na-aga online n'elu Internet na-elele na mkpa na saịtị na-eme ka ndị ntinye akwụkwọ. Ndị a ntinye akwụkwọ nwere ike ịbụ n'ihi a ụgbọ elu, a ụgbọ ala, ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ọbụna ebe a na-anọ. E nwere ụgbọ okporo-ntinye akwụkwọ weebụsaịtị dị ọbụna nke kasị nso nke njem. The mkpa tour mmadụ nwekwara ibu ejighi oru na Internet na technology na ebe. Ọ ga-abụ a obodo ezumike ma ọ bụ ihe mba ezumike, ntinye akwụkwọ maka ihe ọ bụla jikọrọ ya na ebe a pụrụ mere online. E nwere ụgbọelu ntinye akwụkwọ weebụsaịtị, mgbe ụgbọ okporo ígwè ntinye akwụkwọ weebụsaịtị na ọbụna bọs na ntinye akwụkwọ weebụsaịtị dị. Hotel ntinye akwụkwọ na-weebụsaịtị-adị ọtụtụ na e nwere ọbụna a mpi dị ka ndị ahịa na-enwe nchegbu. The price maka otu hotel na otu ụdị ime ụlọ gafee weebụsaịtị ga iche iche àjà ụfọdụ discount ma ọ bụ ndị ọzọ.
Lille na London Train tiketi
Lyon na London site na Ọzụzụ
Luxembourg na tiketi ụgbọ oloko na London
Train ntinye akwụkwọ na-weebụsaịtị akpatre mere mmetụta. Ihe kpatara nke otu ahụ na e nwere ihe umpteen nọmba nke weebụsaịtị, dịkarịa ala otu website maka mba ọ bụla. N'ihi ya na-eme ka o kwe omume na ọ bụla njem na kwesịrị na-eme njem site na ụgbọ okporo nwere ike gbaa akwụkwọ, ọma tupu njem ụbọchị. N'ihi ya n'ịhụ na atụmatụ gị na-adịghị ịghọta ruru ka unavailability oche.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftechnology-and-travel%2F%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#technology #ịzụ akwụkwọ #njem njem ịzụ ụgbọ okporo ígwè Travel teknụzụ njem